Ndeipi nzira yepamusoro yekugeda muchina kukanganisa kuongorora?
Iyo yekumusoro grinder yekukanganisa kuona nzira ndeye yepamusorosoro uye yakakwira kushanda otomatiki kukuya muchina unobatanidza zvemagetsi ruzivo tekinoroji, otomatiki kudzora tekinoroji, servo mota yekutyaira tekinoroji, chaiyo yekuyera tekinoroji uye chaiyo michina michina.Iyo nyowani typ ...
Fekitori Kuwedzera China Yakakura saizi pamusoro yekugeda muchina
Nekusiyana kwezvinodiwa mumusika uye nekuenderera mberi kwekugadzirwa kweCCC tekinoroji, China yemuchina indasitiri yemuchina yakapinda zvishoma nezvishoma nguva yekuchinja-mazano, shanduko mumusika wekutenga uye wekuda, chigadzirwa chinogadziridza kumhanya uye zvimwe zvinhu zvave pedyo nekutora .. .
Edm inonyanya kushandiswa kugadzira machina uye zvikamu zvine maitiro akaomarara emakomba nemakomba. Kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinofambisa, senge yakaoma alloy uye yakaoma simbi; Kugadzira makomba akadzika uye akanaka, maburi akasarudzika, maburi akadzika, mapfundo akatetepa uye kutema zvidimbu zvidete, nezvimwe; Vachishandisa ...
Pasi pesimba redenda, Dongguan Bica zvakanakira nekusimudzira
Kubva kutanga kwegore rino, nekuda kwekukanganisa kwedenda iri pasirese, mamiriro epasi rose ehupfumi ave akaomarara. Kunyanya, kudzimiswa kwemakambani eEuropean neAmerica kwakonzeresa kudzikira kwehupfumi, izvo zvakakonzera michina yekuChina kutengesa kunze kutarisana nekushorwa kwakanyanya ...
Kwayedza Linear Scale, Machine Center, 3 Axis Dhijitari Kuverenga, Kufa Kunyura Edm, Dro Linear Scalse Uye Cable, Cnc vachikuya Machine,